16482 January 4, 2018
15515 January 4, 2018
18598 December 19, 2017
20680 December 14, 2017
25961 November 19, 2017
25463 November 17, 2017
25303 November 17, 2017
25826 November 17, 2017
25851 November 17, 2017
4572 October 30, 2017
5100 October 27, 2017
4955 October 27, 2017
5222 October 24, 2017
2968 October 20, 2017
2816 October 20, 2017
3069 October 20, 2017
3165 October 20, 2017
2580 October 18, 2017
1969 April 25, 2017
2051 March 28, 2017
1671 March 28, 2017
1521 March 27, 2017
2801 March 26, 2017
1515 March 18, 2017
4351 February 27, 2017
2803 February 21, 2017
2289 February 20, 2017
3492 February 13, 2017
2848 February 6, 2017
3017 January 30, 2017
1433 March 18, 2017
1594 March 11, 2017
1264 March 6, 2017
2381 March 6, 2017
1203 March 4, 2017
1684 February 20, 2017
57811 June 22, 2015
37480 April 15, 2015
34982 April 14, 2015
34356 April 13, 2015
34216 April 20, 2015
32124 April 14, 2015
31034 April 20, 2015
30742 April 27, 2015
အိပ်မက်အတိုင်း သစ်ပင်ကြီးက ရဲကားများအပေါ် လဲပြိုကျ
ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တယားမှာ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က သစ်ပင်အကြီးကြီးတပင် မမျှော်လင့်ဘဲ လဲပြိုကျပြီး သစ်ပင်အောက်ရပ်ထားတဲ့ ရဲကား[...] The post အိပ်မက်အတိုင်း သစ်ပင်ကြီးက ရဲကားများအပေါ် လဲပြိုကျ appeared first on DVB.
အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ စွက်ဖက်သည့်ရန်မှ ကာကွယ်မည့် ထောက်ခံချက်မူကြမ်း ထုတ်ပြန်
အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲတွေကို အင်တာနက်ကွန်ရက်တဆင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တဲ့ ပြည်ပရန်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်မူကြမ်းကို အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်[...] The post အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ စွက်ဖက်သည့်ရန်မှ ကာကွယ်မည့် ထောက်ခံချက်မူကြမ်း ထုတ်ပြန် appeared first on DVB.
ဆီးရီးယားရှိ လူစည်ကားရာဈေးတခု ဒုံးကျည်ထိမှန်၊ အနည်းဆုံး ၃၈ ဦး သေဆုံး
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် ဒမတ်စကတ် ဆင်ခြေဖုံးရှိ လူစည်ကားရာ ဈေးတခုကို မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်[...] The post ဆီးရီးယားရှိ လူစည်ကားရာဈေးတခု ဒုံးကျည်ထိမှန်၊ အနည်းဆုံး ၃၈ ဦး သေဆုံး appeared first on DVB.
ရွှေကြွေးကျန်ပေးရန်ကျန်နေသည့် ကုမ္ပဏီများကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရန်တိုက်တွန်း
အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီအပါအ၀င် ရွှေကြွေးကျန်ပေးသွင်းဖို့ကျန်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို အစိုးရက ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ပြီး ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့ လွှတ်တော် ကော်မတီက အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။[...] The post ရွှေကြွေးကျန်ပေးရန်ကျန်နေသည့် ကုမ္ပဏီများကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရန်တိုက်တွန်း appeared first on DVB.
အစိုးရတပ်နှင့်ကေအန်ယူ တင်းမာမှု JMC-U အစည်းဝေးတွင် ဆွေးနွေး
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုရိုင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ အစိုးရတပ်နဲ့ကေအန်ယူအကြား တင်းမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့ ကျင်းပတ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး[...] The post အစိုးရတပ်နှင့်ကေအန်ယူ တင်းမာမှု JMC-U အစည်းဝေးတွင် ဆွေးနွေး appeared first on DVB.